Margarekha मेरो मुख्य उद्देश्य समाज सेवा हो : पुर्व सांसद शाह – Margarekha
मेरो मुख्य उद्देश्य समाज सेवा हो : पुर्व सांसद शाह
राजिवविक्रम शाह जाजरकोटका पुर्व सांसद हुन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट शाह क्षेत्र नम्बर २ को सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । विपन्नलाई विभिन्न समयमा सहयोग गरेर तथा गाउँघरमा विपद हुँदा आफै गाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न तत्पर देखिएपछि शाहको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको थियो । शाहलाई समाजसेवी नेताको रुपमा जाजरकोटका सर्वसाधारणले चिन्ने गर्दछन् ।
राजनीति भन्दा समाज सेवाको इच्छा र भावना आफुमा बढी रहेको पुर्व सांसद शाह बताउछन् । जाजरकोटी जनताको सुख दुःखसँग निरन्तर समाज सेवामा रहेकाले जनताले आफुलाई सेवा गर्ने अवसर दिइरहने शाहको भनाइ छ । कोरोना महामारीको यो बेला जिल्लामा पुगेर पीडित जनतालाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको भएपनि लकडाउनले सम्भव नभएको भन्दै शाहले दुख व्यक्त गरे । यसै सेरोफेरोमा रहेर शाहसँग गरेको कुराकानी ।
तपाइँ जाजरकोटबाट निर्वाचित पुर्व सांसद कोरोना महामारीको संकट आइलागेको छ के गर्दै हुनुहन्छ ?
चरम शिखरमा पुगेका अमेरिका, चाइन, वेलायत, भारत जस्तो देशहरुमा समेत कोरोना भाइरसले अस्तब्यस्त मात्रै बनाएको छैन विश्व मानव समुदायको लागि सर्वाधिक चुनौती बनेको छ । नेपाल लगायत विश्वको अल्पविकसित मुलुकको लागि झनै भयावहको स्थिति छ ।नेपालीहरु रोजगारीको लागि भारतमा रहेको र खुल्ला नाकाको कारण नेपालीहरु घर फर्किदा भारतमा कोरोनाको सक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा नि सक्रमण फैलिने र उपचारको चुनौती बन्ने निश्चित छ । जनचेतना, स्वास्थ प्रविधि, चेक गर्ने साधान मापदण्ड बिनाको हुनुले स्थिति निकै भयावह बनेर हजारौं मान्छेहरुको अकालमा ज्यान जाने खतरा पनि देखिन्छ ।राज्यस्तरबाट नागरिकहरुको ज्यान सुरक्षाको लागि र स्वास्थ्य सम्बन्धि नैसर्गिक हकको रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा पुर्णत जवाफदेही नबन्ने तिर लागेको पाइन्छ । चिनले विश्वभरको देशहरुलाई जस्तो स्पेन, इटाली, वेलायत लगायत देशमा मेडिकल सामाग्री आपूर्ति गर्ने भनिरहेको छ । गरेको पनि छ ।चिनियाँ सरकारसँगै सिधै कुराकानी गरेर सामाग्री आपूर्ति गर्छन । तर नेपालको सरकारले बिचौलिया प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्ने सामाग्री ल्याउछ । मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन संघलाई बाइपास गर्छ । जनताको जीवनमा खेलबाड गर्ने, कमिशन दलाली तिर ध्यान छ । जनताको जीवनमा किन खेल्न खोज्दैछ सरकारले रु सरकार भनेको देश र जनताको अभिभावक हो ।
अभिभावक ले जिम्मेवार र जवाफदेही भुमिका नखेले नागरिकले को बाट अपेक्षा गर्ने रु बिपत्ति, महामारी भनेको यिनीहरु ठुलो संकट हुन । अझ त अहिलेको कोरोना भाइरस विश्व स्वास्थ संगठनले विश्व मानव जातिकै लागि भयानक महामारी भनेको छ । विश्व मानव जातिलाई सचेत रहन आह्वान गरि सकेको छ । सरोकारावाला जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मैले अगाडि पनि भने विश्व महामारीको रुपमा नोवेल कोरोना वा कोभिड १९ ले धैरै मान्छेहरुलाई पिरोली रहेको अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव असर स्वभावतः पर्ने भइहाल्यो । जाजरकोट पनि प्रभावित नहुने भन्ने कुरा भएन । यो अवस्थामा जनतामा कोरोनाको त्राससँगै भोक रोगले ग्रसित जाजरकोटका जनता बढी पीडामा छन भन्ने मलाई लागिराको छ । समग्रमा मानविय हिसावले यो बेला सहयोग गर्नु पर्ने हो ।
जाजरकोटका जनता पीडामा छन भन्ने तपाइँलाई राम्रो सँग थाहा छ, त्यहीबाट विगतमा तपाइँलाई जनताले विजय बनाएर सांसद पनि हुनु भयो यो पटक सहयोग गर्ने सोच्नु भएन त ?
हैन, त्यहाँका जनतालाई सँधै सहयोग गर्ने कुरामा म निरन्तर लागि रहेकै छु । सहयोग गरिरहेकै छु । विगतमा पनि गरे वर्तमानमा पनि स्थितिले साथ दिएको खण्डमा सहयोग रहन्छ, भविष्यमा पनि जाजरकोटी जनतालाई मेरो पुर्ण निरन्तर सहयोग रहन्छ ।यो पटकपनि यस्तो संकटको बेला जिल्लावासीलाई आफै जिल्लामा पुगेर तत्कालको निम्ति गर्न सकिने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तयारी थियो । कोरोना भाइरसबाट जनतालाई सुरक्षितको लागि मास्क, स्यानिटाइजर लगायतको सामाग्री सहित जाजरकोट जानको लागि सुर्खेत गाडी पठाएको र आफू प्लेनमा आउने भनेको हो । अब यो लकडाउनले रोक्यो ।
लकडाउनले गर्दा गारो बनाएको छ । तर पनि कोरोना सचेतिकरणको लागि मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य कमि हुँदैन । लकडाउनको अवस्थाले गर्दा अब यो बिचमा चाहेर पनि त्यो गर्न सकिन । मैले जिल्लावासी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने यो आजको कुरा मात्र भएन । त्यहाँको भौगालिक बिकटता, गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र विविध समस्याको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । नजिकबाट बुझेको छु ।तपाइँलाई कति थाहा छ, मैले जिल्लावासीलाई संकट परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बखत त्यहाँका जनतालाई आफूले सकेजति सहयोग गरेको कुरा सबै जिल्लावासी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई अबगत छ । मैले बिगतदेखि नै मेरो जिल्लावासी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरिरहेकै हो ।
चुनावको बेला सहयोगको कुरा गर्ने अरु बेला जनतालाई वास्ता नगर्ने भन्ने जनगुनासो छ नि र ?
यो जिल्लावासीले भोगेकै कुरा गर्नु भयो होला । कतिपय व्यक्ति र समयमा त्यो भएको पनि होला । यो समस्याकै कुरा हो । अरु प्रतिनिधिले के गरे त्यो वहाँहरुको कुरा भयो । तर मैले आफ्नो तर्फबाट जिल्लावासी जनतालाई सँधै सहयोग गर्ने कुरा बाँचा गरेको छु । निरन्तर सहयोग गरिरहेको कुरा पनि भयो ।
म कसैप्रति पुर्वाग्रही छैन । म जनप्रतिनिधि हुँदा होस् वा नहुँदा होस् सकेजति सहयोग गर्छु । विगतको तपाइँलाई स्मरण गराउन चाहान्छु, जाजरकोटमा २०६६ सालमा फैलिएको झाडापखाला होस् या २०७२ सालमा फैलिएको स्वाइनफ्लुले महामारीको रुप लिदा होस् मैले समयमा औषाधी सहित काठमाण्डौबाट आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमा विशेषज्ञ सहित डाक्टरहरुको टोली लिएर आफै गाउँ गाउँमा पुगेर विरामीको उपचार गरे ।अन्य राहत बितरण सहित जनताको सेवा गरे ।सुत्केरी हुन नसकेको महिलाहरुको ज्यान जोखिम रहेको बेला हेलिकप्टरबाट उद्दारगरि सुत्केरीको ज्यान जोगाउन प्रयास गरे । जाजरकोटको दशेरामा बम बिष्फोट भएको बेला हेलिकप्टरबाट तत्काल घाइतेहरुको उद्दार गरे । यस्तै २०७१ मंसिर र २०७३ फागुनमा जाजरकोटमा भएका बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुलाई आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमा लिएर नेपालगन्ज लगायतका ठाउँमा उपचार समेत गराएर उद्दार गरे ।
मानविय हिसावले मैले सबै प्रयास गरिरहेको छु । जाजरकोटका जनतालाई केही समस्या हुन वित्तिकै आफै गाउँमा गएर सेवा गरेको छु । विपन्नलाई विभिन्न समयमा सहयोग गरेको छु । गाउँमा केही विपद हुन वित्तिकै आफै गाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई मबाट सहयोग भएकै हो । आस्थाको हिसावले काँग्रेसमा भए तर मेरो मुख्य उद्देश्य समाज सेवा हो । जाजरकोटी जनतालाई मैले सहयोग विगतमा पनि गरे । आज पनि गर्छु ।भोलि पनि गर्छु । सहयोग एकछिन या एक पटकको कुरा मात्र होइन निरन्तर रहन्छ । समाज सेवा गर्ने मेरो इच्छा हो । निस्वार्थ ढंगले जिल्लावासीको सेवा गर्छु ।
तपाइँ त सम्पन्न परिवारको मान्छे, समाजसेवा भनेर राजनीति गरिरहनु भएको छ, तपाइँ त राजनीतिज्ञ पनि त हो नि हैन र ?
मलाई राजनीतिज्ञ भन्नु भयो । खासमा म राजनीतिज्ञ हैन । राजनीतिलाई समाज सेवाको रुपमा लिएको छु । आस्थाको हिसाबले म काँग्रेसमा आबद्ध भएता पनि मेरो मुख्य उद्देश्य समाज सेवा नै हो । जाजरकोट मेरो पुर्खेयौली जिल्ला हो । आफ्नै जिल्ला भयो । त्यहाँका आम नागरिकहरुको बिपन्नता, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबीको कारण पिडादायी अवस्थाहरु छ्न । भौगोलिक बिकटता छ । साधान श्रोतको अभाव छ । जसका कारण जनताको जीवनस्तर निकै दयनिय छ ।
त्यसैले केही गर्न सकु भनेर मैले समाज सेवाको कार्य सुचारु गरेको हो । तपाइँको सन्चार माध्यमबाट जानकारी गराउ । मैले छेडागाड नगरपालिका जाजरकोटमा व्यक्तिगत हस्पिटल निर्माण गरिरहेको छु ।यसको करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । खास हस्पिटल निर्माणको मेरो उद्देश्य नै औषधी उपचार नपाएर अकालमा मृत्युु हुने जिल्लावासीको बाध्यतालाई थोरै भएपनि मलम लगाउन सकु भन्ने हो । अर्को समाज सेवाबाट शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान गरौ भन्ने नै हो । अहिले कोरोनाबाट वच्न र बचाउन मेरो निर्माणाधीन हस्पिटल छेडागाड नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनका लागि मैले प्रयोग गर्न दिने भएको छु ।संकट परेको बेला जिल्लावासीलाई मैले गर्ने सहयोगको मबाट कमि रहँदैन । अन्तमा यो संकटको बेला मेरो विचार जनतासम्म प्रवाह गर्ने अवसर दिनु भएकोमा यहाँलाई र यहाँको मिडियालाई धन्यवाद छ ।
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार ११:४७ प्रकाशित
ती मजदुर ५ दिनका भोका थिए उनीहरुको उद्धार गर्नु मानविय धर्म थियो : व्यवसायी पौडेल
उद्योग वाणिज्य संगको उद्योग तर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदारी दिने तयारीमा छु : गैरे
गाँउपालिकाको सेवाप्रवाह चुस्त, सुशासन र पारदर्शी